Targoma - Wikipedia
Ny Targoma dia dikan-teny arameana am-bava somary ara-bakiteny amin'ny ampahan'ny Baiboly hebreo ampiasaina ao amin'ireo sinagoga tany Palestina sy Babilona. Taorian'ny fahababoana babiloniana tamin'ny taonjato faha-6 tal. J.K. dia nosoloan'ny fiteny arameana ny fiteny hebreo ka nilaina ny hanazava ny hevitry ny Baiboly hebreo. Vitsivitsy amin'ireo Targoma am-bava maro no sisa voasoratra amin'izao fotoana izao, ka isan'ireo:
ny targoma avy ao Jodea: targoma amin'ny Torah, izay fantatra amin'ny anarana hoe Targoman'i Onkelosy (Targum Onkelos), sy ny targoma amin'ny Mpaminany (Nevi'im) atao hoe Targoman'i Jonatana (Targum Yonathan);
ny targoma voasoratra taty aoriana kokoa sady tsy feno atao hoe Targoman'i Jerosalema (Targum Yerushalmi) izay momba ny Pentateoka (na Torah);
ary ny targoma amin'ny amin'ny Salamo, ny Joba, ny Ohabolana, ny targoma dimy atao hoe Megilà, izany hoe "sora-tanana", dia ny Tononkira dia Tononkira, ny Rota, ny Fitomaniana, ny Estera, ny Mpitoriteny (na Eklesiasta), ny Tantara, ary ny fanampin'ny Bokin'i Estera.
Atao hoe תרגום / targum ny targoma amin'ny teny hebreo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Targoma&oldid=1000356"
Dernière modification le 14 Janoary 2021, à 09:23
Voaova farany tamin'ny 14 Janoary 2021 amin'ny 09:23 ity pejy ity.